Okwunkowa nke dịrị Okwu
I nwere ike iche isi ọwụwa mgbe na-anụ okwu nke dịrị dị ka ROM, bootloader, mgbake na Nandroid wdg, na ga na-eche na ha bụ ndị nanị maka geeks. Mgbe ha na-adịghị na jọgburu onwe na ọbụna ndị na-abụghị geeks dị ka m nwere ike ịghọta ha, na ọ pụrụ inyere anyị aka ịghọta otú ndị Android dịrị ọrụ na-ezerekwa nsogbu ụfọdụ mgbe anyị na-eme anwansi.
Mgbọrọgwụ ohere n'ezie na-abịa site Linux nke pụtara inweta kasị elu ohere, na Android na-mepụtara dabeere na Linux, ya mere, dịrị pụtara na ị nwere mgbọrọgwụ ohere ma ọ bụ ndị kasị elu ohere ịchịkwa gị Android ngwaọrụ. N'ozuzu-ekwu okwu, ị pụrụ inweta dịrị ohere site na ị wụnye Superuser ngwa ma ọ bụ flash ROM nke ugbua nwere mgbọrọgwụ ohere.
A ROM bụ sistemụ maka Android dị nnọọ ka Windows XP maka Windows OS, ọ na-agụnye ọtụtụ atụmatụ na ọbụna dị iche iche anya. Na ebe a bụ ụfọdụ ezi ihe mere ihe mere anyị kwesịrị kwụsịrị anyị Android ngwaọrụ.
Mgbe anyị na-ekwu 'Stock Android', ọ pụtara na mbụ ROM si Google. N'ọnọdụ ndị ọzọ, 'Stock' nwekwara ike ịpụta na Android nsụgharị site na ekwentị gị emeputa. Na n'ezie nke atọ ọzọ ROMs dị ka CyanogeonMod dabeere na ngwaahịa version.
Radio bụ akụkụ nke femụwe nke na-eji aka ịchịkwa cellular data, Wi-Fi na GPS wdg, ị nwere ike Flash a omenala redio dị nnọọ ka flash a omenala ROM, ma kpachara anya dị ka ọ pụrụ ime ka a otutu nsogbu.
Na-egbu maramara n'ezie nhata wụnye na nke a ọnọdụ, n'ihi ya, mgbe anyị na-ekwu "na-egbu maramara a ROM" pụtara "wụnye a usoro" na gị android ngwaọrụ. Ọ bụrụ na ị na-achọ otú Flash a omenala ROM gị Android ngwaọrụ, biko ego a zuru ezu nkuzi.
E nwere mgbe obere n'ihe ize ndụ mgbe na-egbu maramara a ROM, ma ọ bụrụ na ngwaọrụ gị apụghị ịrụ ọrụ ejikari, nke ahụ bụ ihe anyị na-akpọ bricked. N'ọnọdụ ka ukwuu, ndị na-ekwu "brick" n'ezie pụtara ha ngwaọrụ na-bricked, nke a bụ nnọọ fixable nsogbu.
The bootloader bụ nke kasị ala larịị nke software na ngwaọrụ, ọtụtụ n'ime ha na-ekpochi nke pụtara na ị na-apụghị Flash omenala recoveries ma ọ bụ ROMs. Ya mere ọ bụrụ na ị chọrọ unclock na bootloader tupu agbaji gị na ngwaọrụ. Cheta na: Ịkpọghe bootloader apụtaghị dịrị ngwaọrụ gị, ma ọ dịghị ekwe ka ị na mgbọrọgwụ mgbe mere otú ahụ.
Mgbake bụ software nke eji ịrụ ụfọdụ usoro larịị aga-eme otú ahụ dị ka ndabere, Flash a ROM wdg The ndabere mgbake, i kwesịrị Ị kpọghee ekwt bootloader na Flash a omenala mgbake iji nweta ihe ohere.
Site na iji atọ ọzọ na-recoveries, anyị nwere ike ndabere dum ekwentị nke a na-akpọ Nandroid backups. Ọ bụ n'ezie usoro onyinyo nke ekwentị, ọ na-enye ohere ka anyị na-Flash ka nnọọ oge tupu anyị Flash a ROM ma ọ bụrụ na ihe ọjọọ na-eme.
Nke a bụ ihe ngwa nke nwere ike na-eji na gbanye mgbọrọgwụ ngwaọrụ na ọ bụ dị iche iche si nandroid ndabere. Ọ pụrụ inyere ndabere ngwa ọdịnala na ntọala nke bụ nnọọ uru mgbe ị ịgbanwee n'etiti ROMs ma ọ bụ igwe.
Ọ bụrụ na ị na-eji a HTC ekwentị, e nwere atụmatụ akpọrọ Akara Mbinye aka nkwenye na bootloader (akpọ HBoot na HTC ekwentị), na site ndabara, ekwentị gị bụ S-NA nke ga-egbochi gị na-egbu maramara omenala redio oyiyi. Ya mere ịmafe S-Gbanyụọ ike ka ị na-Flash ọhụrụ redio. RUU, SBF na Ops
RUU, SBF na Ops
Ha bụ ndị faịlụ site na emeputa na ịgbanwe software na ekwentị gị. RUU anọchi ROM ọjọọ Utility maka HTC ntị, SBF anọchi System buut Files maka Motorola ntị, Ops & olulu faịlụ bụ maka Samsung igwe. Ha bụ ndị faịlụ na otú emepụta anapụta OTA gị.
Olileanya na n'elu okwunkowa nke dịrị okwu pụrụ inyere gị aka mma ịghọta dịrị, ma ọ bụrụ na ị nwere ọ bụla ajụjụ ndị ọzọ banyere okwunkowa, dị nnọọ na-eche free ka ikwu okwu n'okpuru.
Olee otú Flash a ROM na-Android Ngwaọrụ